जब चोर घरभित्र चोरी गर्दै थिए घरमालिकले निकाले यस्तो जुक्ति, त्यसपछि मालिकलाई भयो २ बर्ष सजाय – नेपाली सूर्य
जब चोर घरभित्र चोरी गर्दै थिए घरमालिकले निकाले यस्तो जुक्ति, त्यसपछि मालिकलाई भयो २ बर्ष सजाय
January 14, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on जब चोर घरभित्र चोरी गर्दै थिए घरमालिकले निकाले यस्तो जुक्ति, त्यसपछि मालिकलाई भयो २ बर्ष सजाय
यो घटना जापानको हो । एक पटक रातको समयमा एउटा चोर महाजनको घरमा चोरी गर्नको लागि छिर्‍यो । घर मालिक सुतेको देखेर चोरले बहुमूल्य सामानहरू एउटा सुटकेसमा जम्मा गर्न थाल्यो । यहाँसम्म कि सुटकेसमा खाली ठाउँ भेटेर उसले पुस्तक समेत छोडेन ।
तब अचानक मालिकको आँखा खुल्यो । अर्को कोठाबाट आइरहेको आवाजको कारण उनले सबै कुरा बुझे । अब के गर्ने भनेर उनले केही सोच्न सकिरहेका थिएनन् । टेलिफोन पनि चोरको कोठामा थियो ।
जब केही बुझ्न सकेनन् तब महाजनले पलङको छेउमा राखिएको ग्रामोफोनमा जापानको राष्ट्रिय गीत रेकर्ड बजाए । चोरले जब आफ्नो देशको राष्ट्रिय गीतको धुन सुन्यो तब ऊ सावधान भएर उभियो ।
महाजनले मौका पाएर डोरीले चोरको हात खुट्टा बाँधे र पुलिसलाई फोन गरे । यसरी पुलिस आएर चोरलाई गिरफ्तार गर्‍यो । पछि जब बयान दिनको लागि महाजनलाई अदालतमा बोलाइयो तब महाजनले चोरलाई चतुर्‍याइपूर्वक समाएको सबै कथा अदालतमा बयान दिए ।
चोरको राष्ट्र प्रेम देखेर अदालतमा उपस्थित जनसमूह दङ्ग भए । अदालतले फैसला सुनायो, यति ठुलो राष्ट्रभक्त । कसैको बाध्यता नबुझी उसलाई सजाय दिनु पनि अपराध हो । यसैले यसलाई इज्जतसाथ रिहा गरिन्छ ।
तर अदालतमा बसेका सबै दर्शक एक पटक छक्क परे जब अदालतले सेठलाई राष्ट्रिय गीतको अपमान गरेको अपराधमा दुई वर्षको कैद सजाय सुनाए, किनकि उनी राष्ट्रिय गान बजिरहेको बेलामा सावधान मुद्रामा नउभिएर चोरलाई बाँध्न लागिपरेका थिए ।
महिलाको पेन्टी मुखमा माक्स बनाइ लगाएर विमानमा बसेपछि….
नारायणहिटीमा बतास बारे योगेश(बैगुनी केटा)को प्रश्न: पूर्वराजा, महाराजाले रक्सी भट्टी चलाउन पाउने, आगन्तुकले कफी पिउन नपाउने? (भिडियो सहित)
आफुले मन पारेको प्यारो मान्छेको माया पाउने टिप्सहरु हेर्नुहोस
October 23, 2021 Nepali Surya
December 20, 2021 Nepali Surya
घरबेटीको प्रस्ताव: मेरो इच्छा पुरा गर भाडा दिनु पर्दैन
December 25, 2021 Nepali Surya